कठघरामा सञ्चारमन्त्री : भाडाकाे घर खाेज्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीकै भेटियो
हो, मसँग शाही भद्रता छैन । राजपाठभित्र हुर्केको मान्छे परिनँ । गाउँले परिवेशमा हुर्केर आएको हुँ । संघर्ष गरेर, ढिँडो/रोटी खाएर, मेलापात गरेर आएको मान्छे हुँ । मलाई लागेको के सही हो, के गलत हो निर्भीकतापूर्वक भन्छु । मेरो ब्रह्मले देखेको, भोगेको र अनुभूति गरेको बोल्न म डराउँदिनँ । मान्छेका स्वभावहरू प्राकृतिक हुन् । त्यो कसैले गिफ्ट दिने कुरा होइन । अफ्रिकाको मान्छेको कपाल घुम्रो नै हुन्छ । दक्षिण भारतीयहरू अतिकति कालो वर्णकै हुन्छन् । युरोपियन–अमेरिकनहरू अधिकांश गोरो नै हुन्छन्, हब्सीबाहेक । कोरियनहरू अलि होचा नै हुन्छन् । यो रहनसहन, बसोवास, उठबस, संस्कार, शिक्षादीक्षालगायतका कुराहरू जोडिएका हुन्छन् । म सकेसम्म आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्छु । मेरो यो स्वभाव कतिपय मान्छेलाई मन नपर्न सक्छ । मलाई पनि कतिपय मान्छे त्यस्तै लाग्न सक्छ । मान्छेले हात जोडेर कुरा गरेको गरै गर्दा पनि कोही घन्टौँसम्म बोल्दैनन् । कोहीचाहिँ हुने कामलाई हुने र नहुनेलाई नहुने भन्दिन्छन् । त्यसमा के घुमाइराख्नुपर्‍यो ? यदि मलाई कुनै कार्यकर्ताले, जनताले मन पराउँदैनथे भने मैले देशभरिमा दोस्रोे ५५ हजार ५२६ भोट लुटेरै ल्याएको हुँला ? बन्दुक तेर्स्याएर ल्याएको हुँला र ? बुथ क्याप्चर गरेर ल्याएको हुँला र ? म पार्टीको एउटा जिल्लाको तीन–तीनपटक प्रमुख भएँ । के त्यहाँ मेरो कुनै क्षमता प्रदर्शन भएन होला ?
तर, विषय के थियो भने, त्यतिखेर वल्र्डकप हुँदै रहेछ । सबैलाई थाहा छ वल्र्डकप ५:४५ मा सुरु हुन्थ्यो । त्यसको लाइभ ५:१५ वा ५:३० तिर सुरु हुन्थ्यो । मैले नेपाल टेलिभिजनका साथीहरूलाई बोलाएर ‘जनताले फुटबल हेर्न नपाउलान्, यत्रो क्रेज छ फुटबलको । घेराउ होला है’ भनेर भनेको हुँ । उहाँहरूले ‘कुनै कार्यक्रम त हटाउनुपर्छ, हामी मिलाउँछौँ’ भनेर गए । त्यो कार्यक्रम दोस्रोपटक ८:३० हुँदो रैछ । त्यतिखेर मान्छेले हेर्थे होलान् । तर, पौने नौ बजे फेरि फुटबलको अर्को लाइभ सुरु हुने रैछ । अनि, मान्छेहरूले कुनै एकजनाको कार्यक्रम हेर्न रुचाउँछन् कि चार वर्षमा एकपटक हुने फुटबलको महाकुम्भ ? नेपाल टेलिभिजनको दायित्व थियो विश्व महामेलाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने । आफ्ना दर्शक/स्रोताहरूलाई उनीहरूले खोजेको चिज पस्कने । त्यो कार्यक्रम त टेक्निकल्ली हट्यो नि । त्यो कुनै इष्र्याले हटाइएको हो र ? होइन नि । त्यसकारण यो आरोप सोह्रै आना पूर्वाग्रहपूर्ण र नाँच्न नजान्ने, आँगन टेडो भनेजस्तो भयो ।
पण्डितको घरमा गएपछि बिहानै धोतीपाटा फेरेर गायत्री मन्त्र पढ्छ ॐ.... भनेर । बुद्धकहाँ जानुभयो भने ओम माने पेमे होम भनेर १०८ रुद्राक्ष वा बोधिचित्त लिएर गन्छ । नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक देश हो, सबैका आआफ्ना कल्चर छन् । म तपाईंलाई सोध्छु, ‘कम्युनिस्टले बिहे गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ?’ यस्ता पनि प्रश्न हुन्छन् र ? कम्युनिस्टले के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा उच्च नैतिकता र मर्यादामामा भर पर्छ ।
मेरो बिहे त तीनपल्ट भएको छ, श्रीमतीचाहिँ एउटै हुन् है फेरि । अब तपाईंले ‘तीन पल्ट बिहे भा छ’ भनेर हेडलाइन राखिदिनुभयो भने फेरि बर्बाद होला । हामीले लभ गर्‍यौँ । परिवारबाट अनुमति थिएन । दुईजना मात्रै मन्दिरमा गएर टीका लगाएर बिहे गर्‍यौँ । त्यसको केही हप्तापछि ४५/५० जना पार्टीकै साथीहरू बसेर एउटा समारोह गर्‍यौँ । आज हो नि खास दिन त भनेर त्यहाँ पनि फेरि सिन्दूर हाल्न लगाउनुभयो । त्यो पनि बिहे भो । जेठो छोरा जन्मिसकेपछि ससुरालीमा भित्र्याउने भन्ने हुन्छ नेवार कम्युनिटीमा । बाजागाजा बजाएर धुमधामसहित चण्डेश्वरी मन्दिरमा बिहे भयो । तपाईंले भन्याजस्तो अलिअलि दाइजोसाइजो पनि दिए । के ठूलो मुद्दा भयो र त्यो ? मैले लुटेर ल्याएको होइन, तस्करी ग¥या नि होइन । अब ज्याकेट किन लाएको भन्ने सोधेर नि त भएन नि । त्यसको जवाफ त एउटै हुन्छ, ‘नांगै हिँड्नु त ?’